Amy Chilaka Pres 'Classical Classical' Maka Nchịkọta Ọhụrụ Ya
Amy Chilaka Presial 'Oge ochie' Oge Ochie 'Maka Nchịkọta Ọhụrụ Ya
Ekwo! Lee otu TAMAR BRAXTON si eme nkpacha isi ya
Budding mmebe Amy ChilakaMwepụta ọhụrụ a na-enye ụdị ejiji pụrụ iche, ụdị ọgbara ọhụrụ na silhouettes dị mfe, niile na ọnụ ahịa enyi nwere ego n'akpa uwe. Ọhụrụ collection Ngosiputa udiri ihe ndi ozo di iche iche dika otutu ihe mara mma nke ukwu. Anyị na-nzọ na nchịkọta a ga-abụ nnukwu ebe ọ bụ na ọ na-etu ọnụ nke nkecha maka oge dị iche iche.
Dabere na ika ahụ,
Nwanyị ọ bụla na -aga n'ihu ejiji kwesịrị itinye ego na oge ochie oge ochie na oge kachasị elu na ọnọdụ; iberibe ndị nwere ike ịke mfe site n’ụbọchị ruo n’abalị; nkịtị ka glam ma kachasị mkpa na-efu. Na ọkụ a, ụdị ejiji ejiji eponymous Amy Chilaka emeela ka ọ pụta ìhè na nkọwa nke ụlọ akwụkwọ ọta akwụkwọ. Nke a bụ nchịkọta nke uwe nwere akụkụ dị mkpa nke ụdị; ikemputa na iji ogologo oge.
egwuregwubu anya ihe ndi Amy Chilaka nwere inye…
IGBO TIMELESS | Akwụkwọ nyocha
mmebe: Amy Chilaka @amychilaka
onye ejiji ejiji african amy chilaka ejiji na nigeria ejiji na nigerian Uwe ejiji na nigeria nchịkọta nhọrọ ejiji nigerian Onye Okike Ekike Ndi Nigeria
SAFW 2018: Nwa kọfị na-egosiputa usoro ihe eji akpa ihe maka mkpokọta ya nke SS18, Orbit
Dapper na-enweghị atụ! Enwetara oge 'Adebayo Oke-Lawal' 'Hautest' '
Omenala Mara Mma N’agbanwe Nkọwapụta Dike Na Naịjirịa
Jane Michael jikọtara ya na nkụ iji wepụta Mkpokọta Mini Capsule Akpadore 'Asia'
Mai Atafo na-ewebata nchịkọta 'ngwakọ' iji mee ka agbụrụ nwanyị dị elu n'oge ọ kachasị elu.